ओलीको विकल्प खोज्न पौडेल सक्रिय - नेपालबहस
ओलीको विकल्प खोज्न पौडेल सक्रिय
| १४:२५:०७ मा प्रकाशित
२२ चैत, काठमाडौं । केपी ओली सरकारको विकल्प दिन नेपाली काँग्रेस तयार रहेको भन्दै शुक्रबार गरेको निर्णयलाई परिणाममुखी बनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको सक्रियता बढेको छ । कांग्रेसले ओली सरकरको राजीनामा माग्ने र आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको पहल गर्ने निर्णय गराउन पौडेललगायत वहुमत नेतालाई हम्मे हम्मे नै प¥यो । लामो प्रयासपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई कन्भिन्स गराइयो ।
कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै गठबन्धनमा ओली सरकार विघटन गर्न नसकिने भएकाले जनता समाजवादी दलको साथ अपरिहार्य थियो । पछिल्लो घटनाक्रमलाई नियाल्दा त्यस्तो सम्भावना दुरुह देखियो । त्यसैले पनि देउवाले निच मारेका थिए । तर वरिष्ठ नेता पौडेल र पूर्व महामन्त्रद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला–प्रकाशमान सिंहले समेत बल गरेपछि देउवा केही लचक त भए । तैपनि उनले जसपाको भर नभएको भन्दै पन्छन खाजे ।
त्यसको निकास खोज्ने जिम्मा लिए – वरिष्ठ नेता पौडेलले । उनले जसपासँग कुरा मिलाउने जिम्मा मेरो ,तपाई मोर्चा सम्हाल्न तयार हुनुहोस् भनेपछि मात्रै देउवा यस्तो निर्णय गर्न तयार भएका थिए । सोही बमोजिम आज नेता पौडेल मधेशी नेता फकाउने अभियानमा जुटेका छन् । उनका आज सखारै नेता पौडेल जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर भेट्न लोहकन्थली पुगे ।
भेटका बेला महन्थ र पौडेलबीच पुराना प्रसंग पनि निस्किए । भेटमा सहभागी एक मधेसी नेताले दिएको जानकारी अनुसार, पौडेलले देउवाको विकल्पमा अरु नै प्रधानमन्त्री मान्न समेत आफूहरु तयार रहेको बताए । अध्यक्ष ठाकुरले अरु दलसँग कुरै नगरी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टी जनाएपछि नेता पौडेलले सबै सम्भावना खुला रहेको जानकारी दिएका थिए ।
जसपा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनोस् भन्ने पक्षमा रहेको अनुमान पौडेलले गरेको स्रोतको भनाई छ । कांग्रेस कार्यसमितिले पनि सकेसम्म आफ्नै नेतृत्व नत्र अरुकै नेतृत्वमा समेत ओलीको विकल्प दिन तयार रहेको निर्णय गरेको उनको दाबी छ । महन्थसँगको छलफलले मात्रै निकास त नलेदा तर आइसब्रेक चाहिं हुने उनको भनाई छ । लगत्तै नेता पौडेल राजेन्द्र महतोसँग पनि छलफल गर्न अग्रसर भएका छन् । यी दुई नेता सहमत हुने वित्तिकै ओली सरकारको विकल्प खोज्न सकिने बुझाई पौडेलको रहेको छ ।
जसपाको अर्काे खेमा भने ओलीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउन तयार छ । संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई तत्कालै विस्थापित गरी नयाँ सरकार बनाउन हतारिएका छन् । नेकपा माओवादीले समेत पहिला जसपासँग छलफल गरेर मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ । त्यसैले आजका लागि तय गरिएको स्थायी कमिटी बैठकसमेत स्थगित भएको छ । यस प्रयोजनका लागि माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई वार्ता गर्न खटाएको छ ।
नेपाललाई ओलीको प्रश्न: कर्णालीका सांसदहरूलाई किन भड्काउनु भयाे ? ९ घण्टा पहिले
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवरण बुझाउने समयावधि थप ११ घण्टा पहिले
ओलीबिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी, माओवादी केन्द्रले आजै सर्मथन फिर्ता लिने ११ घण्टा पहिले
एमालेका तीन दर्जन सांसद पदमुक्त हुँदै १२ घण्टा पहिले
संसद अधिवेशन स्थगन गरिएकोप्रति कांग्रेसको आपत्ति १ दिन पहिले
एमाले बैठक : पार्टी विरोधी गतिविधि गर्ने नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने १ दिन पहिले
राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सेतो मच्छेन्द्रनाथको दर्शन २ घण्टा पहिले
निरन्तर संक्रमण बढ्दै, एकैदिन १९३ बालबालिका संक्रमित ६ घण्टा पहिले
जेठ अन्तिम सातामा दैनिक ११ हजार संक्रमित फेलापर्ने मन्त्रालयको प्रक्षेपण ६ घण्टा पहिले
पर्यटनमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि काम गर्छौ : मन्त्री ढकाल ६ घण्टा पहिले
महामारीको जोखिम : कतै विद्यालय सञ्चालन, कतै बन्द ! ९ घण्टा पहिले
अजोड इन्स्योरेन्सको स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकमा विष्णु प्रसाद नेपाल नियुक्त १३ घण्टा पहिले
सिभिल बैंकको शेयरमा झुम्मिए लगानीकर्ता, साढे १७ लाख कित्ता शेयर खरिद माग १२ घण्टा पहिले
भारतमा भेटिएको नयाँ भेरिअन्टलाई खोपले पूर्ण सुरक्षा गर्न नसक्ने ! १४ घण्टा पहिले
ओलीको नयाँ दाउ–महन्थलाई प्रम बनाउ २ दिन पहिले
आज थपिए १७३६ काेराेना संक्रमित, ११ जनाको मृत्यु ७ घण्टा पहिले
९० लाखको लागतमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य शुरु ६ दिन पहिले
चैते दशैँमा महोत्तरीको त्रिशूली देवी मन्दिर खुला १३ घण्टा पहिले
सरकारी अस्पतालमा अनलाइनबाट ओपिडी टिकट शुरु ४ दिन पहिले
धादिङको गजुरीमा दुई हेलिकोप्टर आकस्मिक अवतरण २ दिन पहिले
चितवनमा वर्षभरिमा ११६ जनाको मृत्यु, ६१२ घाइते ५ दिन पहिले
उपत्यकामा बिहीबार राति भीषण हावाहरी, बिजुली चम्कियाे परेन पानी ५ दिन पहिले
‘प्रजातन्त्र र राष्ट्रियता सुढृद तुल्याउन राजसंस्था र सनातन हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नु पर्ने’– जबरा ६ दिन पहिले
भारतमा संक्रमितकाे संख्या एक करोड ५३ लाख नाघ्यो ११ घण्टा पहिले
नाष्टसँगको सहकार्यमा डिजाइन काठमाडौं कन्टेष्ट हुँदै ४ हप्ता पहिले
९ दशमलव ८५ प्रतिशतले बढेको महिला लघुवित्तको कति पुग्यो शेयरमूल्य ? ३ हप्ता पहिले
नेपाल र रावलमाथि कारवाहीको डण्डा चलाउने र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने ओलीको तयारी ४ हप्ता पहिले
ओलीको गुट राज्यदोहनमा लागेको गिरोह भएको घनश्यामकाे आरोप ३ हप्ता पहिले
सडकमा मकै पोलेर चलेको जीवन ११ घण्टा पहिले
सभामुखद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्य जानकीदेवी रामलाई शपथ २ हप्ता पहिले
८ दिन बढेको बजारमा देखियो करेक्सन, आजको बजारबाट निराश नै हुने अवस्था छ त ? १ वर्ष पहिले
बाबुराम भट्टराईको चित्र र चरित्र उनकै बोलीमा २ वर्ष पहिले
को बन्ला मोडल हन्ट नेपाल विजेता ? १ महिना पहिले
कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिका लागि कूटनीतिक नोट ५ महिना पहिले